सावधान ! मुलासँग कहिल्यै नखानु यी ४ कुरा:: Naya Nepal
कुन रोगका बिरामीले के खाने ? थाहा पाउनै पर्ने कुरा
चाडबाड भन्नेबित्तिकै रमाइलो गर्ने, मिठो खाने भन्ने सोचाइ सबैको हुन्छ । चाडबाडमा गुलियो, अमिलो, पिरो, चिल्लो, मासुका परिकार बढी प्रयोग हुने गर्छ ।
यस्तो बेला हामी बढी मसलेदार खाना खान्छौं र शारीरिक अभ्यासमा पनि ध्यान दिँदैनौं । यही कारण चाडबाडमा खानपिनकै कारण स्वस्थ मानिस पनि बिरामी हुने दर बढी हुन्छ । अझ दीर्घ रोगी त झन् बढी खतरामा रहन्छन् । त्यसकारण चाडबाडका बेला खानपिनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
मासुका परिकार र चिल्लो खाना ठिक्क खाने र सँगसँगै तरकारी, फलफूल, सलाद, दाल सबै मिलाएर खाएमा स्वास्थ्यलाई हानि हुँदैन । चिल्लो खानाका कारण शरीरमा बोसो जम्मा हुने हुँदा धेरै मानिस बिरामी पर्छन् ।
चाडबाडमा दीर्घरोगीहरूले खानपिनमा ध्यान नदिँदा गम्भीर अवस्थामा अस्पतालमा पु-याउनुपरेका थुप्रै उदाहरण छन् । मासुले हानि मात्रै गर्छ भन्ने होइन तर खाने बेलामा ध्यान दिइएन भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।
चाडबाडको समयमा मधुमेहका बिरामीले चिनी र चिनीबाट बनेका परिकार खानु हुँदैन । यस्ता बिरामीले आलुको अचार, ड्राइफुड, जंक फुड, बोसो भएको मासु नखानु बेस हुन्छ ।
बिरामीले मह, केक, पेय पदार्थ, हर्लिक्स, आइसक्रिम, जाम, जेली, सक्खर, तेलमा तारेका खाना वा बोसो जन्य उत्पादन आदि खानु हुँदैन ।
धुमपान र मद्यपान गर्नु हुँदैन । मधुमेहीले थोरै मात्रामा चामल, गहुँ, मकै, फापर, कोदो, जौ, चिउरा, भुजा कर्नफ्लेक्स, चाउमिन, गेडागुडी खान हुन्छ । माछा, मासु, अन्डा, फलफूल, वनस्पति तेल थोरै खाने तर स्वास्थ्यको ख्याल गरेर ।
मधुमेहका रोगीले स्वस्थ मानिससरह हरिया सागसब्जी, करेला, काउली, गोलभेडा, इस्कुस, घिरौला, सलाद, साग, काँक्रो, सेतो मुला, बन्दा, रायो, कुरिलो, चम्सुर, पालुंगो, गाँजर, कागती आदि खान मिल्छ ।
यस्तै पेय पदार्थमा चिनी तथा घ्यु नभएका चिया, कफी, सुप खान सकिन्छ । खाना खानै परे पनि नियमित क्रियाकलाप र शारीरिक व्यायम पनि गर्न जरुरी छ ।
बाथ रोग भएकाहरूले चाडबाडको समयमा रेड मिट (रातो मासु) अर्थात् खसी, राँगा आदिको मासु र रक्सी खानुहुन्न। साकाहारी भए पनि गोलभेडा, पालुंगोको साग, तामा, गुन्द्रुक, अमिलो पदार्थ, काउली नखाँदा नै राम्रो हुन्छ ।
खानै परेमा थोरै मात्र खाने तर बिहान शारीरिक अभ्यास गर्ने । बाथ अव्यवस्थित खानाको कारणले गर्दा हुने रोग भएकाले बढी चिल्लो, प्रोटिनयुक्त खाना नखाने तथा मदिरा र धुम्रपान नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
विशेषगरी मदिरा, बोसोयुक्त र चिल्लो खानाकै कारण कलेजोमा समस्या निम्तने हो । चाडबाडको समयमा खानामा ध्यान नदिँदा कलेजो बिग्रन सक्छ ।
मानिसको रगतमा रहेको अल्कोहलको मात्रा जति बढ्दै जान्छ यसले दिमाग र स्नायु प्रणालीलाई त्यति नै नकारात्मक प्रभाव पार्दै जान्छ ।
रक्सीलाई पचाउने काम कलेजोको हो । कलेजोमा रक्सी जम्मा हुँदै टुक्रिँदै जल्दै जान्छ, यस क्रममा प्रशस्त ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। ऊर्जा खर्च भएन भने त्यो बोसोमा परिवर्तन भई कलेजो, रक्तनली र मुटुमा जम्मा हुन पुग्छ ।
रक्सीलाई पचाउन कलेजोले धेरै जोडतोडका साथ काम गर्नुपर्ने भएकोले कलेजो थाक्छ, त्यहाँ बोसो जम्मा हुँदै जान्छ । यसका लागि नियमित व्यायाम गर्न जरुरी छ ।
दसैैंको सयममा नेपालीहरूले खाना होस् या खाजास मासु छुटाउँदैनन् । दसैंमा मासुभात, मासुचिउरा तथा मासुका अनेक परिकारसँगै मसालेदार र अधिक चिल्लो भएका खानेकुरा बढी प्रयोग हुन्छ ।
यसका साथै मदिरा पनि अत्यधिक मात्रामा पिउने गरिन्छ । चिल्लो र मदिराको अव्यवस्थित खानपानका कारण मिर्गौला असन्तुलन हुन गई फेलसमेत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यस कारण मिर्गौला रोग लागिसकेकाले चाडबाडमा मासु र अत्यधिक चिल्लो खानु हुँदैन । सामान्य समस्या देखिएकाले पनि मदिरा र खानपिनमा ध्यान नदिँदा मिर्गौलाको नियमित प्रक्रियामा असर पुग्न सक्छ ।
मासुको परिकार धेरै चिल्लो हुने भएकाले उच्च रक्तचाप भएकाले यस्तो परिकार खानु हुँदैन। रातो मासु र चिल्लो दुवै रक्तचापका बिरामीलाई हानिकारक हुन् ।
यो समयमा स्वास्थ्यको समस्याबाट जोगिन रातो मासु नखाने, रक्सी सेवन नगर्ने, धुम्रपान नगर्ने, चिल्लो पदार्थ कम गर्ने, कुखुरा र माछा पनि धेरै नखाने, चिल्लो बढी भएका माछामासु तथा अन्य खानेकुरा खाँदै नखाने, नुन धेरै हालिएको खानेकुरा खानु हुँदैन ।